Le ilogo entsha ye-BMW yemoto i4 yomxholo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Xa iimveliso ezinkulu zithatha umngcipheko kunye neelogo zazo: imeko ye-BMW
I-BMW ityhile ilogo entsha ehambelana nokusungulwa yemoto yakho i4 yomxholo kwaye kwinto esinokuyibona ukuba iya ngqo ngqo kuyilo lwemibala yebala. Njengoko besesitshilo, uphawu olukhulu oluthatha umngcipheko, nangona ngamanye amaxesha eza nenyaniso yokuba kufanelekile.
Ngexesha apho i-fleet ithathelwa indawo, nangona icotha kancinci, ukuya kwinto enokuba ngumbane, umngcipheko wokuthathwa nayo ezi logo zinokuqondwa ngakumbi. Ngamanye amaxesha, ezinye izimvo kunye nezinye iilogo ezibonisa zona.
Bemkile kude neempawu zoqobo zeBMW Ngokukhanya kunye nalawo manyathelo mathathu, ukwamkela iflethi ngaphandle kokulibala ukuba umbala omhlophe kunye noluhlaza okwesibhakabhaka kwilogo entsha enobungozi.
Kwaye abashiywanga kwiqula leinki isangqa imilo kwaye iyaqhubeka ukuba sisiseko esiphambili sokuchonga ilogo yolu dumo lweemoto zaseJamani lodumo lwehlabathi.
Into entsha ayicebisayo kukusondela nakumaxesha edigital ukuba siphila namhlanje. I-logo eneminyaka engaphezulu kwe-103 yembali kwaye njengomongameli webhrend kunye nomthengi we-BMW esitsho, sijamelene nophawu oluya kubudlelwane.
Ukucaca ngokuqaqambileyo kukhupha ukukhanya nangakumbi. Kwaye nokuba i-BMW yongeze le logo intsha kwimbali yeelogo kwinqaku layo kwimbali yayo. Susa umgca omnyama kwi logo lolona tshintsho lufanelekileyo; isikhonkwane Iimpawu ezinomdla kwimibala.
Omnye Isindululo esinomdla kunye notshintsho lwekhosi xa kuziwa kwilogo yakho. Kwaye ngakumbi kwinkampani endala kwaye apho kunzima ukuphefumla umoya wotshintsho ukuze uchukumise uphawu lwayo olubonakalayo kunye nelogo eyaziwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Xa iimveliso ezinkulu zithatha umngcipheko kunye neelogo zazo: imeko ye-BMW
Le ntengiso yengcinga yeAdidas iphantsi
Imowudi emnyama iza kuWhatsApp kuhlobo lwayo lokugqibela kwi-Android kunye ne-iOS